Uyilo lwangaphakathi nguMqondiso weZodiac - Khetha Uphawu
Uyilo lwangaphakathi nguMqondiso weZodiac
Ukucwangciswa kwendawo yokuhlala ngokophawu lwakho lwezodiac kunokwenza ikhaya lakho likhululeke ngakumbi kwaye libe mnandi. Ukuvumisa ngeenkwenkwezi inokukunceda ukuba ulungelelanise ikhaya lakho ukuba lilingane nobuntu bakho ngokusebenzisa iNdawo yeNdawo yeNgingqi, okanye njengoko siza kubona kwisicatshulwa esilandelayo, ngohlalutyo olulula lophawu lwakho lweLanga.
Kwikhaya lakho yonke into ifuna ukucwangciswa kakuhle kwaye ifikeleleke. Awunamonde kwiinkcukacha ezininzi kwaye uthanda izinto ezilula, kunye nezinto ezimbalwa ezibomvu zokwaphula ingaphakathi elizolileyo. Xa uhombisa ikhaya lakho, sebenzisa imibala egqamileyo neqaqambileyo ehambelana nobuntu bakho obuqinileyo, bambelela kubulula kunye nemigca yale mihla, kwaye ungasithwali indawo yakho ngezinto ezingacocwa lula.
I-sofa yakho kunye nebhedi yakho zezona ziqwenga zefenitshala zibalulekileyo endlwini yakho. Kufuneka zikhululeke kwaye zibe nkulu, ngokungathi zenzelwe ukutsiba kwaye zihlale kuzo imini yonke. Uziva ngcono kwizinto zendalo kunye nemibala yasemhlabeni eya kudala umoya omnandi kunye nokuphumla. Khetha ifenitshala eyenziwe ngomthi, ilitye kunye nomqhaphu, nkcenkceshela izityalo zakho rhoqo kwaye uvule iifestile zakho ngokubanzi ukuvumela ukukhanya kunye nokuxhasa ubomi.
Ukuhlalisana kubaluleke ngokwenene kwiGemini, kwaye ufuna ifanitshala yemisebenzi emininzi ekwazi ukuhlalisa inani elikhulu labantu kwaye iphinde ipakishwe kwindawo encinci. Fakela umabonakude izibiyeli ezinomdla eludongeni, fumana i-Intanethi ekhawuleza kakhulu, isitya sephephandaba, kwaye ukhuphe izinto ezikhumbuza amaxesha akhethekileyo ebomini bakho. Gcoba umntwana wakho ngaphakathi kwaye ufake imibala kwiindonga ngokwakho, ube netrampoline okanye itafile echibini kwelinye lamagumbi, kwaye ungalibali ukuthenga i-grill kwi-terrace yakho.
Njengommeli woMhlaza uyalithanda ikhaya lakho - ikhaya. Ufuna izinto ezipholileyo kodwa ezisebenzayo, ezizaliswe ziinkumbulo kunye nezinto eziluncedo, ezinendawo eninzi evulekileyo kunye nokukhanya ukuze ukwazi ukuphefumla. Hombisa udonga lonke ngeefoto ezicwangcisiweyo zosapho lwakho olusondeleyo kunye nabahlobo, yiba nesibingelelo sokukhumbula iinkumbulo zakho, kodwa kulumkele ukuhombisa nokubambelela kwizinto ezaphukileyo. Esona sisongelo sikhulu kwimeko yakho yeemvakalelo yangaphakathi kukungakwazi ukucoca ikhaya lakho kwizinto ezindala kunye nokukhupha inkunkuma.
IiLeos ziyakuthanda ukuziphathela eyona nto inokuthengwa yimali. Baza kufuna ukutyebisa ingqokelela yabo ekhoyo yefanitshala enegama ngamaqhekeza amatsha, anomtsalane. Ukuba uzelwe uLeo, imibala efudumeleyo ifanelekile ngaphakathi kwakho. Udinga ifenitshala epholileyo ukuze ulale ixesha elide njengoko ingonyama ibiya kwenza, iinkcukacha zegolide kunye neorenji, ukukhanya okumangalisayo kunye nendawo enkulu yegumbi lakho lokuhlala, nokuba yintoni ongathanda ukuba ibe yiyo. Sebenzisa ikhaya lakho ukwenza uyilo kwaye uthande inkcukacha nganye oyithengelayo.
NjengoVirgo, waziwa kakhulu ngokucoceka kunye nokuziphatha kwakho, kwaye oku kunokubonwa ekhayeni lakho. Iishelufu zakho ziya kuzaliswa neenkcukacha ezincinci, kwaye uya kuchitha ixesha elininzi lokucoca kwaye ulungisa izinto ezisetyenzisiweyo ezinokusebenza ngakumbi ukuba bezithengwe zintsha. Khetha iishelufa zeencwadi ezivaliweyo ukukhusela imixholo yazo eluthulini, zama ukunciphisa imfuno yakho yeenkcukacha ezingenamsebenzi, kwaye ugcine ikhaya lakho lingenamfezeko, kwaye lisebenziseka ngokusemandleni.
I-Aesthetics ibaluleke kakhulu kuwe, ke qiniseka ukuba uyayihombisa indawo yokuhlala ngokwendlela yakho yokuphila. Kuphephe ukuthengisa kunye nezinto ezisetyenzisiweyo, kwaye ungakuhoyi ukusebenza ngenxa yendlela izinto ezibukeka ngayo. Ikhaya lakho kufuneka lifane negalari enoluhlu olubanzi lwemizobo yantlandlolo, kodwa ixhotyiswe nefanitshala epholileyo kunye negumbi lokulala elonwabisayo. Sebenzisa imibala eqaqambileyo kunye neyomoya, isinyithi kunye neglasi, kwaye uqeshe umntu ukuba acoce endaweni yakho ukuba unalo ithuba.
Ikhaya lakho yeyona ndawo uyithandayo yokusabela, kwaye kungcono ukusebenzisa imibala enoxolo kodwa emnyama kulo, kunye nefenitshala elula, ethambileyo kwaye ekufutshane emhlabeni. Udinga uchuku lwangoku ukuze ukhuthaze i-Uranus ephakanyisiweyo kuphawu lwakho, ke iinkcukacha zesilivere kwimvelaphi emnyama lukhetho olulungileyo. Uthanda iinkumbulo zakho zobuqu kwiidrowa zakho, ezifihliweyo kwindawo ecacileyo. Umkhwa wakho wokuqokelela izinto unokunqanda ukuhamba kwamandla ekhayeni lakho. Vumela ukukhanya kungene kwaye musa ukuvala izithuba ezivulekileyo ukuvumela indlu yakho kunye nentliziyo yakho ukuba iphefumle.
Ungumbono wezodiac kwaye unetalente yokuqonda ukuba izinto ziya kujongeka njani xa zidityanisiwe. Ngobuchule besithuba, akunyanzelekanga ukuba sikuxelele okuninzi malunga nobuphakathi bekhaya lakho, kodwa kufuneka unamathele kwiinkcukacha ezimibalabala, imizobo efana nomntwana, kwaye imephu yehlabathi yinkcukacha eyimfuneko. Ikhaya lakho linokuba nesiphithiphithi kwaye lizaliswe zizinto ezininzi ezahlukeneyo ezikukhumbuza ngokuhamba kunye namaxesha amnandi obomi bakho. Zama ukuyigcina icocekile kwaye ihlelekile.
Ngokwemveli kunye nokusebenza, udinga ikhaya eligcinwa lula. Uya kubhatala ngaphezulu kwezinto ezihlala ixesha elide, kunokuthenga izinto ekuya kufuneka uzitshintshe kwiminyaka embalwa edlulileyo. Hombisa ikhaya lakho ngezinto ezibonisa imbali yakho, izinto zakudala zosapho, amaqhekeza eediliya kunye namatye anqabileyo kunye nesiqingatha sexabiso. Isebenza njengoko unjalo, ufuna ukuba luncedo kuzo zonke izinto, kwaye kufuneka uzinyanzele ukuba uphume nendala kwaye ungene nentsha ukuze uzive ukhaphukhaphu kwaye wonwabile.
Ii-Aquarians ziyaziwa ngencasa yazo ye-eclectic kunye nokungahoywa kakhulu kwimithetho. Xa kuziwa ekuhlobiseni, akukho mithetho kuwe, ngoko unokudibanisa ngokukhululekile iiprinta kunye neepatheni, amachaphaza anemivimbo, ukudala isitayela sakho esikhethekileyo. Xa ukhetha umbala, fumana ukukhanya okuluhlaza okwesibhakabhaka, okanye uhambe ngesilivere kunye ne-sparkly, purple kunye ne-indigo. Yanelisa ukulangazelela kwakho itekhnoloji entsha kwaye xa ugqibile ukuhombisa tyala ezinye iintyatyambo ukuqeqesha imvakalelo yakho yangaphakathi yoxanduva.
IiPisces: Ilizwe lephupha
IiPisceans zifuna ikhaya labo lizolile. Ukuba olu luphawu lwakho lweLanga, khetha imigca elula ukwenza kube lula ukuyigcina, kwaye emva koko ugcwalise isithuba ngeenkcukacha ezinje ngokubamba amaphupha, iikristale ezinemibala, uthuli lomlingo okanye ubuncinci iinkwenkwezi ezine-fluorescent eluphahleni. Igumbi lakho lokuhlambela kufuneka libe likhulu kwaye likhululeke, linebhafu enkulu, amakhandlela anevumba elimnandi kunye neetawuli ezimibalabala, kwaye igumbi lokulala lamaphupha akho yibhedi enkulu eneendonga ezijikelezileyo, amakhethini amnyama kunye nepateni yenkanyezi yePisces yezibane eluphahleni.
Capricorn Pisces Emanzini Isagittarius Virgo